Taariikhda My Butros » 3 Waxyaabaha aad ka ogaato haddii aad dooneysid in uu ku aamin
Haween badan ayaa ku heshiin doonaa in isaga oo sheegay in ragga maanta muujin wax cabsi xoogan oo ay ka go'antahay marka ay timaado xiriirka. The psychologists ayaa kuu sheegi doona janjeera isla la ogaaday leh jinsiga ka soo horjeeda wuxuuna kuu sharixi doonaa dhammaan ku saabsan xididdada u cabsi this ee – walaac in ay lumiyaan xorriyadda, iyaga gaarka u ah iyo madax-bannaanida. Aad ka yar tahay dareen ah in rafiiqaa uusan diyaar u yahay in ay sameeyaan? Waa in aad ogaato in aad leedahay fure u ah in aad qalbiga dadku iyo in falalka aad ay raad weyn ku dul go'aan lagu negaado xiriirka ama u qaadan in heerka ku xiga. Ballanqaadka ma ahan wax nin la hadlay karaa, aad in mar hore la ogaado. Haddii aad soo qaado waqtiga saxda ah, dhan aad samayn karto haddii aad rabto inaad isaga u samayn waa in lagula soo baxo in dareen gaar ah oo isaga ka dhigi doonaa fahmi aad tahay mid ka mid ah.
Isaga dareemaan gaar ah
Ma jiro qof jecel dareen ee la baarayo sida haddii u dhammaystiraan sharaxaadda shaqada ah. Waqti qaado si aad u hesho in la ogaado in aad nin halkii samaynta isaga maraan liis si loo hubiyo in uu yahay mid sax ah. Marka shukaansi, haween badan oo casri ah oo ay leeyihiin caado ka dhigtay shaaca waxa ay ka doonayaan nin ka hor inta aaney qaadan in la ogaado kan dhabtii waa. Ma sababtoo ah nolosheena ka duulaan? Malaha, laakiin waa in aanan ha cadaadiska bulsho helo nin taagan jidka aad farxad. Aad nin dareemaan gaarka ah waxa uu yahay halkii gudbinta farriinta ah in uu kor u BUUXINTA JAGADA BANNAANATAY ah. Waa mid ka mid ah ugu weyn; haddii aan ragga cabsi weyn marka ay timaado xiriirka iyo go'antahay. Markii nin helo in la ogaado waxa aad si ba'an u raadinaysaa nin, wuxuu idinka qaadan doonaa diyaarad. Dhexgalka Your hore ee xiriirka ah waa in dhammaan waxa ku saabsan helitaanka in la ogaado ninka. Waxay ka dhigaysa isaga dareemaan xaqiijisatay.
Ha ha dareemo cadaadis
Waxaa jira fursado sarsare nin dareemi doonaa cadaadis haddii aad isla beddelaan nolosha oo dhan isaga ku wareegsan. Waxyaabaha si tartiib tartiib ah u dhici, xitaa marka aan ka hadlo jacaylka arko koowaad. Waxaa intaa dheer, go'an tahay in uu ka yimaado xaga gudaha iyo lagumana qasbi karo qof. Isaga la'aantiis iska dhego-, noloshaada ku nool! U samee waqti ay isaga ka hor tago, laakiin ha iloobin in aad leedahay qoyska iyo saaxiibada iyo weliba. Dhinaca kale, ma ku hanjabaa inuu isaga tago shan daqiiqo kasta. Noqo farxad iyo isku halayn karo! Isaga dareemaan nasiib aad leedahay oo dheer sugayay dareen ah ka go'antahay ugu dhakhsaha badan loo horumariyo doonaa.
Abuur daqiiqado wanaagsan oo isaga la
Xiriirka A dheer socdo ma la dhisi karaa aasaas adag in uu yahay jacaylka aad u midba midka kale iyo xasuus aad aruursaday isaga la la'aan. Hubi inaad hesho waqti iyo in aad isticmaasho hal-abuurka in isaga la yaab iyo in la dhiso nooca saxda ah ee xusuus. Iska rabitaanka in si ay uga hadlaan mustaqbalka ee xiriirka, iyadoo aan loo eegayn inta aad masayrku ka badan mawduuca. Noqo xiiso leh iyo cayaar ah! Noqo qof uu jecel yahay! Daqiiqado wanaagsan tahay fure u ah Nin qalbigiisa.